Can't Pay Won't Pay (सकेको तिरौंला, नत्र फिरिमा) | TheatreHub
Can't Pay Won't Pay (सकेको तिरौंला, नत्र फिरिमा)
Design and Direction Bikash Joshi
Translation Bikash Joshi
Staged from Aug. 3, 2018 to Aug. 26, 2018
सरिता र प्रमिला छिमेकी हुन् । एकदिन सरिता घर फर्किदा महँगा सामानहरु झोलाभरी अटाई नअटाई र सकिनसकि बोकेर फर्किरहेकी हुन्छिन् । आफ्नो जिज्ञासु स्वभावका कारण प्रमिलाले सरितालाई प्रश्नहरुले खोजिनिती गर्छिन् । सरिता पहिले त अपत्यारीला घटनाहरु सुनाउछिन् तर प्रमिलाले नपत्याएको देखेर सबै घटना बेलिबिस्तार लगाउछिन् ।
सुपरमार्केटमा सामान महँगीले छोईनसक्नु हुनाका कारण केहि महिला मिलेर हुलदंगा गरेका र आफुपनि सोहि भिडमा मिसिएर सामानहरु लिएर आएको कुरा बताउछिन् ।
सामान कहाँ लुकाउने ? पुलिससँग कसरी बच्ने ? र के उनीहरुका ट्याक्सी चालक लोग्नेहरुले यो कुरा स्वीकार्लान् ? यही प्रश्नको वरीपरी नाटक घुमेको छ ।
विशेष तथा अनौठो परिस्थिती वरीपरी घुमेको यो नाटकले, करप्रणाली र बजारमा हुने मूल्यवृद्धिका कारण दुई श्रमजीवी ट्याक्सी चालक र उसको परिवारले भोग्नु परेका कठिनाईहरुलाई व्यङग्यात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरेको छ ।
मुलुकको अहिलेको समसामयिक सामाजिक र राजनैतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर ‘सकेको तिरौंला नत्र फिरिमा’ नाटक बनेको छ । दैनिक जीवनमा हामीले भोग्न परिरहेको हैरानी र आक्रोशलाई यसमा समेट्न खोजिएको छ । यसको कथा तपाईँकै वरपर घटिरहेको हुनसक्ला । नाटकमा आफूलाई खोज्नुभयो र पाउनुभयो भने हामी खुशी हुनेछौँ ।
हाम्रो काम कथा भन्ने हो । मलाई सधैं जसो आज हामीले बाँचेको परिवेश, भाषा, रहनसहन (लाइफस्टाइल)लाई स्टेजमा ल्याउँ जस्तो लाग्छ । हामीले स्वीकारेको सिस्टम र हामीलाई बाध्य पारिएको सिस्टम नै यस्को धागो हो । हामी त्यसैमा जानेर वा नजानेर जेलिएका छौँ ।
पछिल्लो समय थिएटर ओलम्पिक्समा भाग लिन जाँदा दिल्लीको नेसनल स्कुल अफ ड्रामाको पुस्तकालयमा डारियो फो (कान्ट पे ? वन्ट पे !), चुकाएँगे नहिको रुपमा भेटिए र हामिमाझ सकेको तिरौंला, नत्र फिरिमा बनि व्यूतिएका छन् ।
बीचको समय मन्त्रका साथीहरुको साथमा नाटक ‘मिरा मिराज’ निर्देशन गरें, जुन विराटनगर गुरुकुल र पोखरा सभागृहमा मञ्चन भयो । यो अवधिमा देशका फरकफरक शहरको अनुभूतिहरु संगाल्ने मौका जु¥यो । अहिलेको काठमाडौंको वातावरण, राजनीतिक परिवेशसंगै मुल्यवृद्धि अनि कर प्रणाली । यी सबै कुराले गर्दा अहिले यो कथा भन्नपर्छ भन्ने लागेको छ ।
यो नाटक बन्नमा अग्रज दाजुहरु, साथीहरुको साथ र सहयोगको लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद ।
Actor Sarita Giri Anupam Sharma Bijay Baral Umesh Tamang Pramila Khanal
Set Designer Bikash Shrestha
Set Construction Bikash Shrestha Ramsharan Regmi Shiva Pariyar Bikash Panta Ganesh Paudel
Stage Props Bikash Panta
Light Design Umesh Tamang
Sound Design and Operator Amul Shrestha
Photo/Video Bijay Tamrakar
Poster/Brochure Design Bikash Joshi Sandeep Shrestha
Box Office Sapana Chaudhary
Stage Manager Umesh Tamang
Hall Management Nabina Aryal
Assistant Director Sandeep Shrestha